Izinqolobane ze-EcoHealth Alliance - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Posted on April 7, 2021 by UStacy Malkan
Iqoqo lama-imeyili eSaif # 1: I-Ohio State University (4.7.21) (303 amakhasi).
Ama-imeyili oProfesa wase-Ohio State University kanye nochwepheshe we-coronavirus uLinda Saif.
Bona ukubika kwethu: Isihleli sephephabhuku esixhunywe e-China safuna usizo lokuphikisa i-Covid-19 lab origin hypothesis
Ama-imeyili akhombisa ukuthi ososayensi baxoxa ngokufihla ukubandakanyeka kwabo encwadini ebalulekile yamaphephabhuku ngemvelaphi yeCovid
Posted on February 15, 2021 by USainath Suryanarayanan
UMengameli we-EcoHealth Alliance uPeter Daszak, inhloko yenhlangano ebambe iqhaza ocwaningweni olusebenzisa ufuzo ngama-coronavirus, uxoxe ngokufihla iqhaza lakhe isitatimende esishicilelwe ngonyaka owedlule ngo I-Lancet egxeka “imibono yetulo” ikhathaza ukuthi kungenzeka ukuthi igciwane le-COVID-19 livele endaweni yokucwaninga, ama-imeyili atholwe yi-US Right to Know show.
Isitatimende seLancet, esisayinwe ososayensi abaqavile abangama-27, sibe nomthelela omkhulu ekuqedeni izinsolo zososayensi abathile zokuthi iCOVID-19 ingaba nobudlelwano neWuhan Institute of Virology yaseChina, enocwaningo ne-EcoHealth Alliance.
UDaszak wabhala lesi sitatimende wasisabalalisa nakwabanye ososayensi ukuze basayine. Kepha i Ama-imeyili kwembula ukuthi uDaszak nabanye ososayensi abasebenzisana ne-EcoHealth babecabanga ukuthi akufanele basayine isitatimende ukuze bafihle ukuzibandakanya kwabo kuso. Ukushiya amagama abo esitatimendeni kungayinika "ibanga elithile kude nathi ngakho-ke ayisebenzi ngendlela ephikisayo," kubhala uDaszak.
UDaszak uqaphele ukuthi "angayithumela nxazonke" kwabanye ososayensi ukuze basayine. “Sizobe sesikubeka ngendlela engayixhumanisi nokubambisana kwethu ukuze sikhulise izwi elizimele,” wabhala.
Ososayensi ababili uDaszak ababhalela ngesidingo sokwenza leli phepha libonakale lizimele nge-EcoHealth, bangongoti be-coronavirus uRalph Baric noLinfa Wang.
Kuma-imeyili, uBaric uvumelane nesiphakamiso sikaDaszak sokuthi angasayini I-Lancet isitatimende, sibhala ukuthi "Ngaphandle kwalokho kubukeka kuzenzela wena, futhi silahlekelwa umthelela."
UDaszak ekugcineni wasisayina ngokwakhe lesi sitatimende, kepha akazange akhonjwe njengombhali noma umxhumanisi womzamo.
Ama-imeyili ayingxenye yemibhalo etholwe yi-US Right to Know ekhombisa ukuthi uDaszak ubesebenza okungenani ekuqaleni konyaka odlule ukubukela phansi umbono ukuthi i-SARS-CoV-2 kungenzeka iputshukile kusuka ku- Isikhungo seWuhan.
Ukuqubuka kokuqala kwe-COVID-19 okubikiwe bekuse-Wuhan.
I-US Ilungelo Lokwazi ngaphambili ubike ukuthi uDaszak ubhale lesi sitatimende ukuze I-Lancet, futhi uyihlelele i- "Kungabonakali ukuthi ivela kunoma iyiphi inhlangano noma umuntu oyedwa" kodwa kunalokho kubonakale njenge “Incwadi elula evela kososayensi abaphambili”.
I-EcoHealth Alliance iyinhlangano engenzi nzuzo eseNew York esethole izigidi zamadola oxhaso lwabakhokhi bentela baseMelika ukuze basebenzise izakhi zofuzo, kubandakanya nososayensi baseWuhan Institute.
Ngokuphawulekile, uDaszak uvele njengomuntu ophakathi nophenyo olusemthethweni ngemvelaphi kaSARS-CoV-2. Uyilungu le- i-World Health OrganizationIthimba lochwepheshe elicwaninga ngemvelaphi yenoveli ye-coronavirus, futhi I-Lancet COVID 19 Ikhomishini.
Bona ukubika kwethu kwangaphambilini ngalesi sihloko:
Ama-imeyili amasha akhombisa izingxoxo zososayensi zokuxoxa ngemvelaphi yeSARS-CoV-2 (12.14.20)
Usosayensi onokushayisana kwezintshisekelo ezihola iLancet COVID-19 i-task force emsukeni wegciwane (11.24.20)
I-EcoHealth Alliance yahlela isitatimende sososayensi abalulekile "ngemvelaphi yemvelo" ye-SARS-CoV-2 (11.18.21)
Bhalisela i-newsletter yethu yamahhala ukuthola izibuyekezo ezijwayelekile kuphenyo lwethu lwe-biohazards.
Ama-Biohazards, IBiohazards Blog, Uphenyo lwethu I-Covid-19, Umanyano we-EcoHealth, imvelaphi ye-SARS-CoV-2, umsuka wobhubhane, Ikhomishini ye-Lancet ye-COVID
Imibhalo yaseColorado State University ocwaningweni lwe-bat pathogen
Posted on January 21, 2021 by USainath Suryanarayanan
Lokhu okuthunyelwe kuchaza imibhalo yoSolwazi baseColorado State University (CSU) uRebekah Kading noTony Schountz, i-US Right to Know eyithole esicelweni samarekhodi omphakathi. UKading noSchountz bangama-virologists abacwaninga amagciwane ahlobene nelulwane ezindaweni ezishisayo emhlabeni jikelele. Basebenzisana ne-EcoHealth Alliance, uMnyango Wezokuvikela wase-US (DoD) kanye ne-Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), uphiko lwezocwaningo nentuthuko yamasosha aseMelika.
Imibhalo inikeza amazwibela kufayela le- inkimbinkimbi yezempi-yezifundo zososayensi abafunda ukuthi bangavimbela kanjani ukugeleza kwamagciwane abangelwa ubhubhane avela kumalulwane. Imibhalo iphakamisa imibuzo mayelana nezingozi ezithathelanayo, ngokwesibonelo, zokuthunyelwa kwamalulwane namagundane atheleleke ngamagciwane ayingozi. Futhi aqukethe ezinye izinto eziphawuleka, kufaka phakathi:
NgoFebhuwari 2017, abaxhumanisi beDoD boHlelo Lokusebenzisana Lokuzibandakanya Kwezinto Ezisongela Ezokuvikela kumemezela umfelandawonye omusha wamalulwane omhlaba wonke “ukwakha nokusimamisa amakhono ezwe nawesifunda ukukhiqiza ukuqonda okuthuthukile kwamalulwane nemvelo yawo ngaphansi kwesimo sezinto ezibangela ukuphepha.” Okuhambisana nalokhu, ama-imeyili show ukusebenzisana phakathi kwe-CSU, i-EcoHealth Alliance kanye ne-National Institutes of Health's Rocky Mountain Laboratories ukwakha indawo yokucwaninga amalulwane e-CSU ukukhulisa izifundo zokutheleleka ngamalulwane.
Umfelandawonye wamalulwane womhlaba wonke waba yiqembu elibizwa ngeBat One Health Research Network (I-BOHRN). Ngo-2018, ososayensi abakhulu be-BOHRN babesebenza ne-DARPA kuphrojekthi ebizwa nge-PREEMPT. Amarekhodi e-CSU ku-PREEMPT kukhombisa ukuthi iRocky Mountain Laboratories, i-CSU kanye neMontana State University bakha imishanguzo "ehlukanisiwe" yokugoma ukusabalalisa kubantu bamalulwane "ukuvimbela ukuvela nokugeleza" kwamagciwane angaba ubhadane avela kumalulwane aye kubantu babantu. Inhloso yabo ukuthuthukisa “imishanguzo yokuzisabalalisa ” - okusakazeka ngokutheleleka phakathi kwamalulwane - ngethemba lokuqeda ama-pathogen ezinqolobaneni zabo zezilwane ngaphambi kokuphonswa kwabantu. Lolu cwaningo luyaphakama ukukhathazeka ngemiphumela engahlosiwe yokukhiphela obala izinhlangano ezizisakazele zofuzo, kanye nezingozi zemvelo zokuvela kwazo okungaziwa, ubudlova nokusabalala.
Ukuthumela amalulwane namagundane atheleleke ngamagciwane ayingozi kudala amandla e-spillover engahlosiwe kubantu. UTony Schountz wabhala ku-EcoHealth Alliance VP uJonathan Epstein ngoMashi 30, 2020: “I-RML [Rocky Mountain Labs] ingenise inqolobane yegciwane le-Lassa ngokuthi izalelwe ekuthunjweni e-Afrika, bese kuthi inzalo ingeniswe ngqo ku-RML. Angazi noma amalulwane amahhashi angazalelwa yini ekuthunjweni, kodwa lokho kungaba yindlela yokunciphisa ukukhathazeka kwe-CDC. ” Igciwane le-Lassa isakazwa ngamagundane atholakala entshonalanga ye-Afrika. Kubanga ukugula okunamandla okubizwa nge-Lassa fever ebantwini, okuholela ekufeni okulinganiselwa ku-5,000 1 njalo ngonyaka (izinga lokufa elingu-XNUMX%).
NgoFebhuwari 10, 2020, uMongameli we-EcoHealth Alliance uPeter Daszak uthumele i-imeyili ukucela abasayinela uhlaka lwe- The I-Lancet isitatimende "Ukugxeka kakhulu imibono yetulo ethi i-2019-nCoV ayinayo imvelaphi engokwemvelo." Kule imeyili, uDaszak wabhala: “UDkt. ULinda Saif, uJim Hughes, uRita Colwell, uWilliam Karesh noHume Field babhale isitatimende esilula sokweseka ososayensi, ezempilo yomphakathi kanye nabasebenzi bezokwelapha baseChina abalwa nalokhu kuqubuka (okunamathiselwe), futhi siyakumema ukuba uhlanganyele nathi njengabasayini bokuqala. ” Akazange akhulume ngokubandakanyeka kwakhe ekubhaleni isitatimende. Ukubika kwethu kwangaphambili wabonisa lokho I-Daszak wabhala isitatimende esashicilelwa ku- I-Lancet.
UTony Schountz ushintshisane ngama-imeyili nososayensi abalulekile beWuhan Institute of Virology (WIV) uPeng Zhou, uZhengli Shi noBen Hu. Ku- i-imeyili yango-Okthoba 30, 2018, USchountz uphakamise uZhengli Shi ukuthi abe “yinhlangano engahambisani nhlobo” phakathi kwe-CSU's Arthropod-borne and Infectious Disease Laboratory ne-WIV, okubandakanya “ukusebenzisana kumaphrojekthi afanele (isib. Ama-arboviruses namagciwane athwalwa ngamalulwane) nokuqeqeshwa kwabafundi.” UZhengli Shi waphendula kahle kusiphakamiso sikaSchountz. Amarekhodi awasikiseli ukuthi noma yikuphi ukusebenzisana okunjalo kwaqalwa.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe
Isixhumanisi seqoqo lonke lemibhalo yaseColorado State University singatholakala lapha: Amarekhodi e-CSU
Ama-Biohazards, IBiohazards Blog amagciwane elulwane, ukukhathazeka ngokuphepha, Umanyano we-EcoHealth, inkimbinkimbi yezempi, amagciwane angaba khona obhubhane, ubungozi nezingozi zezindawo ezinokuvikelwa okuphezulu, Isikhungo se-Wuhan se-Virology
Ama-imeyili amasha akhombisa izingxoxo zososayensi zokuxoxa ngemvelaphi yeSARS-CoV-2
Ama-imeyili asanda kuthola anikela amazwibela okuthi ukulandisa kokuqiniseka kuthuthuke kanjani ngemvelaphi yemvelo yenoveli coronavirus SARS-CoV-2, ngenkathi kusala imibuzo ebalulekile yesayensi. Izingxoxo zangaphakathi kanye nohlaka lokuqala lwencwadi yososayensi zikhombisa ochwepheshe bexoxa ngezikhala zolwazi nemibuzo engaphenduliwe ngemvelaphi yelabhu, njengoba abanye bebefuna ukucindezela imibono “engemuva” yokuthi kungenzeka ukuthi leli gciwane livele ebhodini.
Ososayensi abanethonya nezindawo eziningi zezindaba bachaze ubufakazi ngokuthi “nzima”Ukuthi leli gciwane lavela ezilwaneni zasendle, hhayi ebhodini. Kodwa-ke, ngemuva konyaka amacala okuqala abikiwe we-SARS-CoV-2 edolobheni laseChina iWuhan, kuncane okwaziwayo kanjani noma kuphi kwavela igciwane. Ukuqonda umsuka weSARS-CoV-2, obangela isifo i-COVID-19, kungabaluleka ekunqandeni ubhadane olulandelayo.
Ama-imeyili ochwepheshe be-coronavirus USolwazi Ralph Baric - etholwe ngesicelo samarekhodi omphakathi yi-US Right to Know - khombisa izingxoxo phakathi kwabamele iNational Academy of Sciences (NAS), kanye nochwepheshe bokungavikeleki kwezifo ezithathelwanayo emanyuvesi ase-US nase Umanyano we-EcoHealth.
NgoFebhuwari 3, i-White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) kubuziwe iNational Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) ukuze “ibize umhlangano wochwepheshe… ukuze kuhlolwe ukuthi iyiphi idatha, ulwazi namasampula adingekayo ukubhekana nokungaziwa, ukuze kuqondwe imvelaphi yokuziphendukela kwemvelo ye-2019-nCoV, futhi iphendule ngempumelelo kokubili ukugqashuka kwanoma yikuphi ukwaziswa okungaqondile okuba umphumela. ”
I-Baric nezinye izazi zezifo ezithathelwanayo zazibandakanyeka ekubhaleni impendulo. Ama-imeyili akhombisa izingxoxo zangaphakathi zochwepheshe kanye ne okusalungiswa kusenesikhathi yangomhla kaFebhuwari 4.
Umbhalo wokuqala wachaza "imibono yokuqala yochwepheshe" ukuthi "imininingwane etholakalayo ye-genomic iyahambisana nokuziphendukela kwemvelo nokuthi okwamanje abukho ubufakazi bokuthi igciwane lenzelwe ukusabalala ngokushesha okukhulu phakathi kwabantu." Lo musho osalungiswa waphakamisa umbuzo, kubakaki: “[cela ochwepheshe ukuthi bangeze imininingwane ethile yamasayithi okubopha?]” Iphinde yafaka umbhalo waphansi kubakaki: ukuvela kwama-coronaviruses ahlobene]. ”
In i-imeyili eyodwa, yangomhla kaFebruwari 4, uchwepheshe wezifo ezithathelwanayo uTrevor Bedford waphawula: “Ngeke ngikhulume ngezindawo zokubopha lapha. Uma uqala ukukala ubufakazi kuningi okufanele ucabange ngakho kuzo zombili lezi zimo. ” Ngazo “zombili lezi zimo,” kubonakala sengathi iBedford ibhekisa kuzimo zelebhu kanye nemvelaphi yemvelo.
Umbuzo wezindawo ezibophezelayo ubalulekile engxoxweni mayelana nemvelaphi yeSARS-CoV-2. Izindawo ezihlukanisayo ezibophayo ku-SARS-CoV-2's spike protein confer “Okuseduze” ukubopha nokungena kwegciwane emangqamuzaneni omuntu, nokwenza i-SARS-CoV-2 itheleleke kakhulu kune-SARS-CoV. Ososayensi baphikise ngokuthi izingosi ezihlukile zokubopha zeSARS-CoV-2 kungenzeka ukuthi zivele ngenxa ye- zemvelo spillover endle noma ngamabomu I-laboratory ukulungisa kabusha kokhokho wemvelo ongakadalulwa okwamanje we-SARS-CoV-2.
The incwadi yokugcina eshicilelwe ngoFebhuwari 6 ayizange isho izingosi ezibophezelayo noma ukuthi kungenzeka ukuthi ivela kulabhorethri. Kuyacaca ukuthi kuneminye imininingwane edingekayo yokuthola umsuka weSARS-CoV-2. Incwadi ithi, “Ochwepheshe basazise ukuthi imininingwane eyengeziwe yokulandelana kwe-genomic evela kumasampula egciwane ngokwendawo - nangokwesikhashana - ayadingeka ukunquma umsuka nokuvela kwegciwane. Amasampula aqoqwe kusenesikhathi ekuqhamukeni kweWuhan namasampula avela ezilwaneni zasendle abaluleke kakhulu. ”
Ama-imeyili akhombisa abanye ochwepheshe bexoxa ngesidingo solimi olucacile ukuphikisana nalokho okuchazwe ngokuthi yi "crackpot theories" yemvelaphi yelabhu. UKristian Andersen, umbhali oholayo we iphepha elinomthelela leMvelo Medicine egomela imvelaphi engokwemvelo ye-SARS-CoV-2, uthe okusalungiswa kwasekuqaleni “kwakukukhulu, kodwa ngiyazibuza ukuthi ngabe sidinga yini ukuqina kakhulu embuzweni wobunjiniyela.” Uqhube wathi, “Uma enye yezinhloso zalo mbhalo kungukuphikisana nalezi zinkolelo-mbono, ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi sikwenze lokho ngokuqinile nangolimi olucacile…”
In impendulo yakhe, IBaric ihlose ukudlulisa isisekelo sesayensi ngemvelaphi yemvelo yakwaSARS-CoV-2. “Ngicabanga ukuthi sidinga ukusho ukuthi isihlobo esiseduze kakhulu naleli gciwane (96%) satholwa kumalulwane azungeza emhumeni waseYunnan, eChina. Lokhu kwenza isitatimende esiqinile ngemvelaphi yezilwane. ”
Okokugcina Incwadi kusuka kubongameli be-NASEM abathathi hlangothi ngemvelaphi yegciwane. Ithi, “Ucwaningo lwezocwaningo ukuqonda kangcono imvelaphi ye-2019-nCoV nokuthi ihlobana kanjani namagciwane atholakala kumalulwane nakwezinye izinhlobo zezinto eseziqalile. Isihlobo esiseduze kakhulu se-2019-nCoV sibonakala njenge-coronavirus ekhonjwe kumasampula athathwe ngamalulwane aqoqwe eChina. ” Incwadi ibhekisiwe ezimbili izifundo lokho kwenziwa yi-EcoHealth Alliance neWuhan Institute of Virology. Zombili ziveza imvelaphi engokwemvelo ye-SARS-CoV-2.
Emasontweni ambalwa kamuva, incwadi kaMongameli yeNASEM yavela njengomthombo onegunya lomuntu onethonya Isitatimende sabososayensi esishicilelwe ku I-Lancet lokho kudlulise isiqiniseko esithe xaxa ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2. I-USRTK ibike ngaphambilini ukuthi uMongameli we-EcoHealth Alliance uPeter Daszak wabhala la mazwi, aqinisekisa ukuthi "ososayensi abavela emazweni amaningi… baphetha ngokumangazayo ukuthi le coronavirus yavela ezilwaneni zasendle." Lesi sikhundla, kusho isitatimende, "sisekelwa futhi yincwadi evela kubongameli be-US National Academies of Science, Engineering, and Medicine."
Ukuqokwa okwalandela kukaPeter Daszak nabanye ababambisene ne-EcoHealth Alliance ukuze Ikhomishini yeLancet COVID19 noDaszak kuye Uphenyo lweWorld Health Organisation Imvelaphi yakwaSARS-CoV-2 kusho ukuthi ukwethembeka kwale mizamo kucekelwa phansi ngu ukungqubuzana kwezintshisekelo, nangokubukeka sengathi sebevele behlulele ngaphambi kwalolu daba.
“Izingqinamba okufanele sizigweme”
Ama-imeyili eBaric akhombisa nomele i-NAS ukuphakamisa kososayensi base-US kufanele “mhlawumbe bagweme” imibuzo emayelana nemvelaphi yakwa-SARS-CoV-2 emihlanganweni yamazwe womabili ababeyihlela nochwepheshe be-Chinese COVID-19. Ama-imeyili ngoMeyi nangoJuni 2020 axoxa ngezinhlelo zemihlangano. Ososayensi ababambe iqhaza baseMelika, iningi labo elingamalungu e-NAS Ikomidi Elimi Ngezifo Ezithathelwanayo Eziqhamukayo Nezinsongo Zempilo Zekhulu Lama-21, kubalwa uRalph Baric, Peter Daszak, David Franz, James Le Duc, Stanley Perlman, David Relman, Linda Saif, noPeiyong Shi.
The ososayensi ababambe iqhaza baseChina kufaka phakathi uGeorge Gao, uZhengli Shi, noZhiming Yuan. UGeorge Gao unguMqondisi we-China CDC. UZhengli Shi uhola ucwaningo lwe-coronavirus eWuhan Institute of Virology, kanti uZhiming Yuan unguMqondisi weWIV.
In i-imeyili kubahlanganyeli baseMelika mayelana neseshini yokuhlela, Isikhulu Sezinhlelo Eziphezulu se-NAS uBenjamin Rusek uchaze inhloso yomhlangano: “ukukugcwalisa ngemvelaphi yengxoxo, xoxa ngezihloko / imibuzo (uhlu kuhlu lwesimemo sakho nokunamathiselwe) nezinkinga okufanele gwema (imibuzo yemvelaphi, ipolitiki)…
Xhumanisa nama-imeyili kaProfesa Ralph Baric wase-University of North Carolina angatholakala lapha: Ama-imeyili eBaric (Amakhasi we-83,416)
I-US Right to Know ithumela imibhalo evela kuzicelo zethu zamarekhodi womphakathi ze uphenyo lwethu lwe-biohazards. Bheka: Imibhalo ye-FOI ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2, izingozi zokucwaninga ngomsebenzi kanye namalebhu e-biosafety.
Ama-Biohazards, IBiohazards Blog i-coronavirus, I-Covid-19, Umanyano we-EcoHealth, I-National Academy yeSayensi, imvelaphi ye-SARS-CoV-2
Izinto ezivela kuma-imeyili e-Baric
Vuselela i-2.15.21 - I-imeyili entsha ye-Daszak: “Akunasidingo sokuthi usayine 'iSitatimende' uRalph !!"
Izinto ezivela kuma-imeyili kaRalph Baric we-coronavirus(12.14.20)
Usosayensi onokushayisana kwezintshisekelo ezihola iLancet COVID-19 i-task force emsukeni wegciwane(11.24.20)
Uphenyo lwemvelaphi lakwaSARS-CoV-2 luphakamisa imibuzo ebalulekile mayelana nokushoda obala maqondana nocwaningo ngamagciwane angaba ubhadane, kanye nezinto ezibalulekile kanye nabadlali abakha izindawo zokuvikela ukuphepha ezivikelekile lapho kugcinwa khona amagciwane ayingozi futhi aguqulwe ukuze abulale kakhulu.